Iindaba - Izinto eziluncedo kwizixhobo zomatshini we-CNC
Izinto eziluncedo zezixhobo zomatshini ze-CNC
Isixhobo somatshini we-CNC sisifinyezo sesixhobo somatshini wolawulo lwedijithali, esisixhobo somatshini esizenzekelayo esixhotyiswe ngenkqubo yolawulo lwenkqubo. Inkqubo yolawulo inokuqhuba ngokufanelekileyo inkqubo kunye neekhowudi zolawulo okanye eminye imiyalelo yokomfuziselo, kwaye iyichaze, ukwenzela ukuba isixhobo somatshini sihambele kwaye siqhubekise iinxalenye.
Xa kuthelekiswa nezixhobo zomatshini eziqhelekileyo, izixhobo zomatshini we-CNC zinezi zinto zilandelayo:
● Ukusebenza ngokuchanekileyo okuphezulu kunye nomgangatho wokusebenza okuzinzileyo;
● Unxibelelwano olunonxibelelwano oluninzi lunokwenziwa, kwaye iinxalenye ezinobume obunzima zingaqwalaselwa;
● Xa iindawo zoomatshini zitshintsha, ngokubanzi kufuneka zitshintshe inkqubo yolawulo lwamanani, enokugcina ixesha lokulungiselela imveliso;
● Isixhobo somatshini ngokwawo sinokuchaneka okuphezulu kunye nokuqina okuphezulu, unokukhetha inani elifanelekileyo lokuqhubekeka, kwaye unemveliso ephezulu (ngokubanzi ama-3 ~ ama-5 amaxesha ezixhobo zomatshini eziqhelekileyo);
● Isixhobo somatshini sineqondo eliphezulu lokuzenzekelayo, esinokunciphisa amandla emisebenzi;
● Iimfuneko eziphezulu kumgangatho wabaqhubi kunye neemfuno eziphezulu zobugcisa kubasebenzi bokugcina.
Ngenxa yokuba i-CNC lathe processing ingumsebenzi ophezulu wokuchaneka, kwaye iinkqubo zayo zokulungisa zijolise kwaye inani lezinto zokubamba zincinci, ke iimfuno eziphezulu zibekwa phambili kwizixhobo ze-CNC ezisetyenzisiweyo. Xa ukhetha izixhobo ze-CNC izixhobo zomatshini, kuya kufuneka uthathele ingqalelo le miba ilandelayo:
Uhlobo, iinkcukacha kunye nokuchaneka kwebakala lezixhobo ze-CNC kufuneka zikwazi ukuhlangabezana neemfuno zokwenza i-CNC lathe processing.
Ukuchaneka okuphezulu. Ukuze kuhlangatyezwane nokuchaneka okuphezulu kunye neemfuno ezizenzekelayo zotshintsho lwesixhobo se-CNC lathe processing, isixhobo kufuneka sibe nokuchaneka okuphezulu.
Ukuthembeka okuphezulu. Ukuqinisekisa ukuba akuyi kubakho monakalo ngengozi kunye neziphene ezinokubakho kwisixhobo kwi-CNC machining, eya kuthi ichaphazele inkqubela phambili yomatshini, isixhobo kunye nezinto zokudibanisa kunye nayo kufuneka zithembeke kwaye zilungelelanise. Ukulungiswa kwesinyithi ngokuchanekileyo
D Ukuzinza okuphezulu. Izixhobo ezilungiswa zi-lathes ze-CNC, nokuba zirhabaxa okanye ukugqiba, kufuneka zibe nokuqina okuphezulu kunezo zisetyenziswa kwizixhobo zomatshini eziqhelekileyo, ukunciphisa inani lamaxesha okutshintsha okanye okusila izixhobo kunye nokuseta izixhobo, ngaloo ndlela kuphuculwa ukwenziwa kwezixhobo zomatshini we-CNC . Ukusebenza ngokukuko kunye nomgangatho wokulungiswa kwesiqinisekiso.
Ukuphuka okuhle kwendlela yokusebenza kunye nokususa i-chip. Ukulungiswa kwe-CNC lathe, ukuqhekeka kwe-chip kunye nokususwa kwe-chip akuphathwa ngesandla njengezixhobo zomatshini eziqhelekileyo. Iichips zilula ukusongela isixhobo kunye nomsebenzi, oya kuthi usonakalise isixhobo kwaye ukrobe umphezulu womatshini wobugcisa, kwaye ubangele nokwenzakala kunye neengozi zezixhobo. , Echaphazela umgangatho wokuqhubekeka kunye nokusebenza okukhuselekileyo kwesixhobo somatshini, ke isixhobo siyacelwa ukuba siphucuke ukusebenza kwe-chip kunye nokususa i-chip.
Ixesha Post: Feb-28-2021